काठमाडौंमा संक्रमण बढेको बेला हतारोमा... :: विवेक राई :: Setopati
काठमाडौंमा संक्रमण बढेको बेला हतारोमा सार्वजनिक सवारी खुला विज्ञसँग छलफल नगरी हडबडमा निर्णय
विवेक राई काठमाडौं, असार २६
त्यसमाथि पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकाले यहाँ संक्रमण कुन अवस्थामा छ भन्ने कसैले आँकलन गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयका विज्ञ समूहका एक अधिकारी भन्छन्, 'उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अलिक हतारो नगरेको भए हुन्थ्यो। कम्तीमा साउनको ७ गतेसम्म यसलाई रोक्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो।'
यो निर्णय लिनुपूर्व कुनै पनि विज्ञहरूसँग औपचारिक छलफल गरिएको छैन। 'हामीसँग पनि कुनै छलफल भएन। सायद यातायात संगठनहरूको प्रेसर थेग्न नसकेर सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको हुनुपर्छ,' ती अधिकारीले भने।
मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. रोशन पोखरेल भन्छन्, 'यो निर्णय ठिक हो वा हैन भन्ने अहिले भन्न सकिँदैन तर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिँदा यसको निगरानी कसले गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो।'
'पछिल्लो समय उपत्यकामा समुदायमै संक्रमण गएको हो कि भन्ने विषय चर्चामा आइरहँदा त्यसको एकीन गर्न पनि हामी समुदायमै गएर ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्दैछौं,' उनले भने।
उनले यो निर्णय गरिरहँदा सरकारले अन्य सावधानी र निगरानीका कुरालाई पनि त्यति नै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्ने जनाए। 'हामीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने त भनेका छौं तर त्यो सँगै कडा निगरानी गर्न सकेनौं भने हामी फेरी घातक काम गर्दैछौं,' उनले भने।
'त्यसैले संक्रमण अवस्थालाई लिएर सरकारले प्रत्येक हप्ता निर्णय उल्टाउन तयार हुनुपर्छ,' उनले भने। सरकारले सार्वजनिक यातायात शुक्रबारबाट सञ्चालन गर्नसक्ने निर्णय गरेपनि यातायात व्यवसायी महासंघले सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन।
यात्रुहरूले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, धेरै भिडभाड नगर्ने, चर्को आवाजमा कुरा गर्न नहुने डा. पुन सुझाउँछन्। चर्को आवाजमा कुरा गर्दा थुकको छिटाहरूबाट संक्रमण सर्ने सम्भावना हुँदा सचेत रहन उनको आग्रह छ। डा. पुनले सरकारले जारी गरेको 'कोभिड-१९ टेस्टिङ' सम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले पनि संक्रमण फैलाउन सघाउ पुर्याउने बताए।
उक्त निर्देशिकामा लक्षणविहीन व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न नपर्ने भनिएको छ। यसमा फरक मत राख्दै उनी भन्छन्, 'अधिकांश संक्रमितहरूमा लक्षण देखिएको छैन। यसरी बाहिरी जिल्लाहरूबाट आएका मानिसहरू संक्रमित भएपनि उनीहरूमा लक्षण देखिँदैन। तर निर्देशिका अनुसार भन्दै उनीहरूको परीक्षण हुँदैन र उनीहरू समुदायमा घुलमिल हुनसक्छन्। जसले गर्दा संक्रमण सर्ने संम्भावना हुन्छ।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २६, २०७७, १५:४५:००